Yan Aung: ထုံသွားတဲ့ နှလုံးသား…
နာနဲ့ တူတူရော တစ်ခွက်တစ်ဖလား မော့ချင်ဘူးလား ပြီးတော့ နာပြောနေကြစကားလေးမေ့သွားပီလား သစ်ပင်မြင့်ရင် လေတိုက်ခံရမှာပါပဲဆို ။ ခုတော့ ပြန်လည် ထူမတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဆိုလို့ ချီးယားစ် ဆက်ရေးထားကွ နာနဲ့ ရန်ဖြစ်
လိုက်.. ပြန်..လိုက် လုပ်ဦးစို့ အဟဲဟဲ :P
Never never give up your blogging.
I still need your help together with new bloggers coz you are kind heart. Keep it up, bro Yan Yan.
မောင်ရန်အောင်ရေ ဒီလိုသေးသေးလေးတွေကို ထည့်စဉ်းစားနေရင် အသင် အဟတ် အဟတ် လို့တောင် အသံထွက် ရယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ကွယ်
ကဲ ဒီတော့ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေး အဲ ကိုယ့်ဘလော့ ကိုယ်ရေး ပြီးရင် အိပ်သာ နေပေတော့
အား ဆေး တွေကိုပဲ ရွေးပြီး သုံးဆောင်ပါကွယ်
မော့ဖို့ထိဘဲစဉ်းစားသလား အဓိပတိကြီးရဲ့ ... အခုချိန် မှောက်နိုင် လောက်တဲ့ အချိန်လေ ဘယ်နယ် ဒီမှာ အားလုံးက အဓိပတိကြီး ကို မျှော်နေကြတာ။
ကိုရန် အသေချာ ဖတ်ပြီး စဉ်းစားပါ
- ခက်ခဲ ပင်ပန်းစွာ ရထားတဲ့ အတွက် ပညာ အရာ ဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူး
- ကူညီသူ အားလုံးကို စေတနာ အမှန်နဲ့ ကူညီတာ လူတိုင်း အသိဘဲ သက်သေပြရရင် ဘဘော့ကာတွေရဲ့ ဘယ်ဆီပုံးကိုကြည့်ကြည့် ကိုရန်ကိုသိတဲ့ ဘလော့တိုင်းမှာ ကိုရန့် ကို တက်ထား၊ ညွှန်ထားတာ ချည့်ဘဲ
- ယုံကြည်အားကိုးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းပြောတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ နာလိုစိတ်ကြောင့်လား မနာလိုစိတ်ကြောင့်လား ၊ သူတို့ ထိခိုက်ခဲ့ လို့လား၊ သူတို့ အခွင့်အရေး မရလိုက်လို့ရလိုက်တဲ့သူကို တတ်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ ဘဲ တိုက်တာလား
- အခွင့်အရေးဆိုတာ တခါဘဲ ပေါ်တတ်တာ ၂ခါ မပေါ်ဘူး ယူသင့်ရင် ယူရမှာဘဲ သမာသမတ်ကျတဲ့ နည်းနဲ့ ပေ့ါ
- ကိုယ့်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောသလား ကြားလူက ပြောတာလား ။ ကြားလူက တဆင့် ကြားရတယ် ဆိုရင် မျက်နှာချင်း ဆိုင်ပြီး မေးကြည့်
- လူသားဘဲဆိုတော့ ခေတတော့ ခံစားရမှာပေါ့
- ကြာကူလီဆိုရအောင် ဥသျှစ်တတင်း နှမ်းနစ်တင်း ဖြစ်နေတဲ့ ဒီကာလမှာ အရည်ချင်းရှိတဲ့ သူတယောက်အတွက် လက်ကမ်းမဲ့သူ တပုံကြီး လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါ
- သစ္စာဖောက် ဖြစ်မဖြစ် ကိုရန် မှန်သော သစ္စာဆိုပြလိုက်ပါ
- ခုထိ အခက်ခဲများ ကျေးဇူးတရား နားလည်သူ တွေ ရှိပါသေးတယ်။ အဆင်မပြေတိုင်း စိတ်ဆင်းရဲ ပြီး စိတ်လေနေရင်၊ ကျန်တဲ့ သူတွေကို ပစ်ထားပြီး လစ်လျှူရှု့ နေရင် ကိုရန့် နဲ့ အဆင်မပြေသူတွေ ပိုပြောကောင်းဖို့အတွက် ဖြစ်သွားမှာပေ့ါ။
- သူတို့ အကြောင်း ခေါင်းထဲထည့်ထားတာ သတ်မှတ်ချိန်နဲ့ ဘဲထားသင့်တယ် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကိုရန်ရဲ့ အချိန်၊ စိတ်ချမ်းသာမှု့ ၊ ကူညီချင်မှု့နဲ့ ကိုရန်အကူညီ မျှော်နေကြတဲ့ ဘလော့ကာတွေ အတွက် နစ်နာတာပေါ့
ဒီအသက်အရွယ်ရောက်နေတဲ့ ကိုရန် နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်
အဘိဓမ္မာတွေနဲ့တော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကြားဘူးတာကတော့ ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်း ခွေးစား အဲ့ ဘယ်မှမရွေ့ဘူးဆိုလားပဲ။ သန်းရွှေလို ကျင့်ကြံပါကွယ်။ မကောင်းတာပြောရင် နားမပါသလိုပေါ့။ အဟွတ် အဟွတ်
ကိုရန်ကြီး မင်္ဂလာပါ။ Blog လောကကနေတော့ နားဖို့ မတွေးပါနဲ့ ဗျာ။ ကျွန်တော် တောင် ကိုရန်ရေးတဲ့ Blogger ကောင်းတစ်ယောက် လိုက်နာသင့်တာတွေ ဖတ်ပြီးတော့ Blog ကိုသေခြာလေး ရေးဖြစ်နေတာဗျ ။ စိတ်ပန်းနေရင် ခဏနားပေါ့။ စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကျေတယ်တဲ့။ ကိုရန် ရွှင်လန်းပါစေ ဗျာ။ Post ကောင်းတွေလည်း ရေးနိုင်ပါစေ။ :)
ကျွန်မဘလော့မှာ ကွန့်မန့် ပွတ်သွားတာတောင် မကြာသေးဘူး..
ကိုရန်အောင်ပြောတာတွေ ကျွန်မ မမေ့ဘူး...
ကိုရန်အောင် ကျွန်မကို ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ ခံစားချက်တွေ သိုသိပ်ပီး ရှေ.ဆက်ချီတက်ကြရအောင်
အစ်မမယ်လိုဒီပြောသလိုပဲ keep it up
အစ်မကန်စွန်းဥပြောသလိုပဲ ကိုယ့်သမိုင်းကိုရေး ကိုယ့်ဘလော့ကိုရေး...
စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ကိုရန်အောင်ကြီး Aja Aja Fighting
သူရဲပုံတွေကြည့်ချင်တယ် ကိုရန်အောင် :D
ဥပေက္ခာ = ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ လစ်လျုရှုခြင်း
မအားတဲ့ကြားက လာရေးပေးသွားတယ် မစ္စတာရောင်အန်ရှင့်..
ပြောတော့ဘူး သောက်ပဲသောက်တော့မယ် ...
ရော့ ကိုရန်တစ်ခွက် ကျွန်တော်တစ်ခွက် ..
အကုန်လုံးကို ခဏမေ့လိုက်ကြစို့... ဟတ် ဟတ် ဟတ်
အားမလျှော့ပါနဲ့ကိုရန်အောင်ရေ။ အားလုံးကအားပေးနေကြတာ။ ကိုရန်အောင့်ဘက်မှာလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အားပေးလျက်ပါ ကိုရန်။ ပထမဆုံး c-box မှာ ရေးပေးတဲ့ ကိုရန်က အေးချမ်းသူရဲ့အမြင်မှာ အားကျစရာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပါပဲ။ အသက်ဘယ်လောက်လေးပဲကြီးကြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အရည်အချင်းကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်လေ။ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘာအတွက်နဲ့မှ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကို လက်မလျှော့ပါနဲ့လို့...
အဟဲ နောက်ကျ သွားသဗျ .... နားလည် ပြီးသားပါဗျာ ... ရှေ့ဆက်ပြီး အလုပ်နဲ့ သက်သေ ပြလိုက်ပါ ... ဘာမှ တွေဝေမနေပါနဲ့ ... ထပ်တွေ့ ဆုံ ပြောဆို ကြသေးတာပေါ့ ... :)
အဟား ကိုရန်အောင် စိတ်ညစ် နေခဲ့ တယ်လား။ ဟုတ်တယ်ဗျာ.. ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး။ မသိတဲ့ အတူတူ ခေါက်ထား လိုက်ကြ စို့နော.. နေရောင် အလင်းထဲမှာ ကိုယ်က ရပ်နေရင် အလင်းရောင်ရယ် အရိပ်ရယ် ၂ခု ထွက်မှာပဲ.. အရိပ်ကို ကြည့်နေရင် နေရောင်ကို ဘယ်မြင်ရတော့မလဲ… အမှောင်ထဲမှာ နေရင်တော့ ၂မျိုး ကွဲနေစရာ မလိုတော့ ဘူးပေါ့နော… နေရောင်ကိုပဲ ကြည့်ကြ ပါစို့ ဗျာနော်… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ အဲလိုပဲ အားပေး နေရ တယ်ဗျို့.. အွန်လိုင်း စောင့်နေ တယ်ဗျ.. လာလည်ဦးလေနော http://khunmyahlaing.myanmarbloggers.org/2007/11/blog-post_04.html
ကိုရန်အောင်ရေ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်စရေးတာ တစ်လမပြည့်သေးပါဘူး။ မြန်မာလို အဆင်ပြေပြေရေး လို့ရအောင် ကိုရန်အောင်ဘလော့ဂ် ကို ဖတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။ ပြောတဲ့လူတွေ ပါးစပ်ညောင်းရင် ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ချီးမွှမ်း ၇ ရက်၊ ကဲ့ရဲ့ ၇ ရက်ပါဗျာ။ အရေးကြီးတာ ကိုယ်လိပ်ပြာ ကိုယ်သန့်ဖို့ပဲလေ။
"Keep the conscious clear then never fear" တဲ့ ။ ကိုရန်အောင်ရဲ့ စေတနာတွေကို အမြဲလေးစားလျက်ပါဗျာ။
Happy Birthday to you, "Ko Yan" =)
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ.. အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
ဘလော့ဂါကြီးက ပြန်ရေးတော့မယ်ဆိုတော့.. ကျွန်တော်တို့အတွက် အတိုင်းထက်အလွန်... ၀မ်းမြောက်စရာပေါ့ဗျာ..
အားပေးနေဆဲပါ.. ကိုရန်ရေ.. လူချင်းမဟုတ်ပေမယ်လို့ comment တွေနဲ့ အားပေးနေမယ်နော်..